Blockchain News 11 EyoMqungu 2018 - Blockchain News
EyoMqungu 11, 2018 admin
Blockchain News 11 EyoMqungu 2018
Regulator Ex-Financial: Ndinqwenela ukuba utyalo Bitcoin xa ndamxelela bonke abantu ukuba baqaphele
Regulator zemali Owayesakuba Pati Chilton inqwenela kokuba esityalwe bitcoin kunye nezinye cryptocurrencies ezithandwayo umva xa exelela wonke umntu ukuba baqaphele.
Chilton ithi usenguye “Wild West” ngaphandle ikusasa market kulawulwa, kodwa wongeza ukwehla okukhulu ixabiso soloko “wathamba phandle.”
Fisco yaseJapan yazisa ukusungulwa fund cryptocurrency
uphando mali Japanese ngokuqinileyo kunye nomsebenzisi exchange bitcoin Fisco libhengeze ukuba liya kusungula fund cryptocurrency.
Esiza emva nkampani wakhupha iqhina bitcoin kunyaka ophelileyo, kwingxowa-mali ye crypto entsha iya imali ngaphezu 300 million yen ($2.66 million) e bitcoin kunye nezinye iimali digital, ngokutsho Nikkei.
Le ngxowa-mali ubanga ukuba yeyokuqala hlobo yayo e-Japan.
Arizona bemithetho Fundisa bill ukuvumela abemi ukuba bahlawule iirhafu kunye Bitcoin
Oyilwayo entsha zingeniswe kwi-Arizona Yeengwevu wayeza, ukuba siphunyeziwe, kuvumela abantu ukuba ukuhlawula abo amatyala irhafu karhulumente usebenzisa bitcoin okanye ezinye cryptocurrencies.
iingxelo Public zibonisa ukuba oyilwayo - exhaswa ngurhulumente Senator Warren Petersen kunye nentsebenziswano-exhaswa yeminye imithetho emithathu - yangeniswa ukuze iqwalaselwe ku Jan. 9. Kuye ukususela bayaxelelwa Arizona Yeengwevu Rules kwiKomiti ukuze olunye.
Ngokutsho kombhalo, umlinganiselo avumele ukuba kusetyenziswe “nesango yentlawulo, ezifana bitcoin okanye enye cryptocurrency, ngokusebenzisa iinkqubo peer-to-peer” ukuze ahlawule “irhafu kunye nayiphi na inzala kunye nezohlwayo” ezityalwa urhulumente.
Arizona bemithetho baye bafudukela ukuvuma eyilwayo enxulumene zobugcisa kwixesha elidlulileyo. kwentwasahlobo Last, indlu yowiso-mthetho yagqityezelwa umthetho enakana lotyikityo blockchain kunye nezivumelwano smart njengesisebenzayo phantsi komthetho karhulumente. awuthathi. Doug Ducey wasayina umlinganiselo umthetho Matshi wokugqibela.
U.S. inkonzo bekumele uceba Ukuthengiswa 3,813 bitcoins
i U.S. Bekumele Service uya Ukuthengiswa off 3,813 bitcoins ethathwe ngokunxulumene federal, sokumelwa namatyala zolawulo. Le ngqekembe kubalule- phantse $54 million ngamanani zangoku.
Ifandesi liSebe arhente Justice iya kuqhubeka ngethuba iiyure ezintandathu ku Jan. 22. Ezi bitcoins ziya kuhlangatyezwa ezithengiswayo 11 iibhloko, kunazo eya kuqulatha 813 bitcoins. Abathathi-nxaxheba bayacelwa ukuba wenza idiphozithi ye $200,000, arhente uthe kwingxelo ngoLwesine.
US Yeengwevu ukubamba intlanganiso ukuxoxa cryptocurrencies
i U.S. Iinkonzo zemali panel yeeNgwevu kuya ibambe iingxoxo kwinyanga ezayo kunye neemarike nabalawuli beli lizwe ukuxoxa bitcoin phakathi iinkxalabo ekuphumeni phezu imingcipheko cryptocurrencies eziyiyo ukuba imali, umntu onolwazi ngqo le nto Reuters.
INdlu Yeengwevu IKomiti Banking uya kuthabatha ubungqina evela leMveliso Futures Trading IKomishoni USihlalo Christopher Giancarlo kunye Securities and Exchange Commission USihlalo Jay Clayton ekuqaleni February, lo mthombo.
Russia lihlaziya bill cryptocurrency: ukutshintshiselana ezivunyiweyo kuphela ukuba
Russia kaThixo Ministry of Finance liya kwenza i Ngaphezu semthethweni bill cryptocurrency, nto leyo eza kuvumela ukurhweba asethi ezinjalo kuphela ezithile “esemthethweni” zingxoxo.
USekela Finance UMphathiswa Alexei Moiseyev waxelela RNS.
Uluhlu kokutshintshiselana igosa sele okwangoku samkelwe, oko kusenziwa “kuxoxwe”.
Moiseev waqinisekisa ukuba ubulungiseleli akafuni ukuba kuncitshiswe ukutshintshwa lwemali ezikhoyo crypto, kodwa ulindele ukuba “ezinye uhlobo sikhokelo ".
“Ngubani na crypto-kwizimali, le nto iya kuba. Kodwa ukuthenga nokuthengisa ziya ngandlela zifane. Ingcamango jikelele kukuba kuya kuba yimfuneko ukuba ukuthenga nokuthengisa impahla ukutshintshiselana ezisemthethweni kwaye oku kuya kuvakaliswa, ngokomthetho.”
alexey Moiseyev – USekela Mphathiswa wezeMali
I-Ofisi yoMphathiswa wezeMali thaca lo ummiselo ngobanjiso Crypto-lwemali ngoDisemba 2017, uxwebhu iya kungeniswa kwi-State Duma ngoFebruwari 2018. ICandelo loMphathiswa ikholelwa ukuba crypto-iimali kufuneka ziqwalaselwe impahla, imali, kunye nezimbiwa – kuwa phantsi inkcazelo imisebenzi ushishino irhafu ezizodwa.
Arkansas ufumana kuqala Bitcoin ATM
in Arkansas’ isakhiwo emide Uhleli umatshini bitcoin yokuqala sikarhulumente.
Lo matshini litsale ingqalelo ukususela ngoNovemba xa yafakwa kwi Corner Ivenkile kunye More kumgangatho osezantsi bali-40 Simmons Tower edolophu Little Rock.
“I Siyifumene ezininzi zendlela unyawo nayo,” Uthe umphathi store Connie Davis.
Lo matshini ungowabantu Freedom Coin Inc., evulekileyo ebizwa ngokuba yi-ofisi kufutshane Simmons Tower.
Chris Sweeney, co-ngumseki kunye igosa eliyintloko yesigqeba Freedom Coin Inc., no K.C. Surrett, Umongameli igosa eliyintloko zemali, Wathi zihlela ukuba ufake 10-15 imishini e Northwest Arkansas, Fort Smith, EJonesporo kunye neminye imimandla embhaxa Arkansas.
“Ndicinga ukuba imvumelwano popular kukuba amakamva zokurhweba ngcono ixabiso,” Sweeney uthe.
“Yinto njengabafanelekileyo nje U.S yethu. lwemali,” kusho Duszota, a Arkansas indoda, umthengi Bitcoin ATM ngubani kwaxoxwa ezazilapho.
emaznstie ekorea: Akukho uceba ban cryptocurrency
Kule veki, komthombo eziliqela yeendaba ingxelo ukuba urhulumente woMzantsi Korean liceba ban urhwebo cryptocurrency. Ngokuqinisekileyo akunjalo, njengoko Bill kuya kufuneka ukuba kudlula yenkongolo kuqala phambi kokuba kuthathwe ukusebenza.
Njengoko sele kwenziwe ukususela kuDisemba 13 of 2017, i-South Korea Mphathiswa nje ulungiselela bill ukuba sivale phantsi Exchange ezithile cryptocurrency. Akuyi uceba ban norhwebo cryptocurrency kwixesha elifutshane.
Ukuba urhulumente woMzantsi Korean wayezimisele ban urhwebo cryptocurrency, kwakuya kwenziwa njalo ngoDisemba 13, endaweni yokukhupha sikhokelo ezahlukeneyo yokulawula kuquka ukusasazwa cryptocurrencies basemzini zorhwebo.
CCN kutyhilela sikhokelo ezine ezinkulu bolawulo urhulumente woMzantsi Korean ulindeleke ukuba uqalise Januwari 20:
– Ekuthinteleni abatyali unaccredited ekuphatheni ilahleko ngenxa cryptocurrencies simbi kakhulu.
– Nqanda ukutshintshiselana cryptocurrency ulawulwa ngqongqo lingayisebenzisi njengamaqonga kwerandi kubatyali-mali unaccredited.
– Cela iibhanki kunye ukutshintshiselana ukuqinisekisa abatyali underaged abolunye uhlanga azikwazi akhawunti zorhwebo ukuvula Exchange cryptocurrency.
– Okwethutyana gxotha abatyali zamaziko kunye nabatyali yentengiso ekuyizaliseni cryptocurrencies.
I-South Korea Ministry of Strategy and Finance agxininise ukuba akavumelani ngesiphakamiso Ministry of Justice.
"Thina musa ukwabelana okufanayo njengoko Ministry of Justice kwi ukuvalwa cryptocurrency exchange enokwenzeka,"MSF uthe.
kubonakala, i cryptocurrency yorhwebo ban isindululo lungekagqitywa okanye ekuvunyelwene ngayo yi-South Korea Ministry of Strategy and Finance.
Blockchain News 8 EyoMqungu 2018
Ron Paul Yokubhalisa ...
Robotrading okanye Trading manual
Robotrading nguye p ...
ra ukukhonya Bitcoin ...
Post Previous:Blockchain News 10 EyoMqungu 2018
Post Next:Bitcoin Hardforks yintoni na?